4 Fidirana haingana | Agile Scrum Master Certification «NY FAMPIANARANA
4 Fidirana haingana | Fepetra mari-pahaizana Agile sy Scrum
Ireo mari-pahaizana ao Scrum, ny rafitra fototra amin'ny fandrosoana fandrindrana ny Agile
Inona avy ireo tombony azo amin'ny fanamafisana ScrumMaster?
Ilaina ny fanamafisana ScrumMaster
Inona no ataonao rehefa mahazo ny certificate CSM ianao?
4. Agile sy Scrum
Ny fanomanana Scrum sy ny Fanamarinana dia manome fahafaham-po ny fahitana ny fanambarana mampihetsi-po amin'ny alalan'ny famporisihana ezaka miavaka, mandaitra, ary fahombiazana eo amin'ny mpiara-miasa. Mampivelatra fikambanana ny fampandrosoana manerantany ary mitondra azy ireo amin'ny famonoana ho faty bebe kokoa.
Ny orinasa ScrumMaster ® Certified Certified ScrumMaster® dia mampiasa ara-dalàna ny Scrum, manatsara ny fahombiazan'ny fanatanterahana ankapobeny. Ny CSM dia mahatakatra ny toetra sy ny fomba amam-panao sy ny fampiharana Scrum ary manome fampahalalam-baovao sy fahaiza-manao ankoatr'ireo mpitarika mahaleo tena. Ireo CSM dia mandeha amin'ny maha "mpikarakara ny mpisava lalana", manampy ny sisa tavela amin'ny fiaraha-miasan'ny Scrum ary mandray ny rafitra Scrum. Ny CSMs koa dia miaro ny vondrona avy any ivelany sy ivelany. Mahatsiaro misimisy kokoa momba ny ampahany ScrumMaster ary mahita tranga iray amin'ny fandaharam-potoana ScrumMaster.
Amin'ny alalan'ny fandefasana mari-pankasitrahana Certified ScrumMaster® anao:
Ampitomboy ny fisokafan'ny asa ataonao amin'ny alàlan'ny fampiharana sy fanatanjahantena eo amin'ny sehatry ny indostria momba ny fampiharana ny fanao Agile.
Asehoy amin'ny raharaham-barotra sy ny mpiara-mitory ny fanatontosanao ny fianarana santionan'ny Scrum.
Mijoroa amin'ny fananganana Scrum sy ny haben'ny an'ny Certified ScrumMaster amin'ny ampahany tsara indrindra ao Scrum.
Ataovy miaraka amin'ny vondrona manam-pahaizana Scrum fantatra fa mifantoka amin'ny fanovana tsy misy fiafarana.
Amin'ny maha CSM anao dia hanana fahafahana hameno ny ampahany amin'ny mpiara-miasa ScrumMaster na Scrum ianao. Amin'ny alàlan'ny fomba fanamafisana, ianao dia handray ny fahatakarana ny rafitra Scrum, ao anatin'izany ny ampahan'ny vondrona, ny fampiharana ary ny curios.
Amin'ny fanamarihanao CSM, dia manana adiresy ihany koa ianao amin'ny fisoratana anarana amin'ny 2 taona amin'ny Scrum Alliance. Amin'ny alalan'izany fandraisana anjara izany dia afaka manatevin-daharana ny biraon'ny mpanjifan'ny mpifanolo-bodirindrina, ny fikambanana tsy ara-dalàna amin'ny aterineto, mahazo fidiram-bola goavana amin'ny hetsika ara-tsosialy, Ankoatr'izany, ny CSM dia afaka mampiasa ny logo izay noforonina manokana mba hanasongadinana ny fanamarinana.
Raha te hahazo ny mari-pankasitrahana CSM ianao, dia tokony handray fepetra CSM avy amin'ny Certified Scrum Trainer (CST) na Endresed Scrum Trainer (EST) ary mampiseho ny fandrosoanao amin'ny alalan'ny test de online CSM.
Ny hetsika voalohany mankany amin'ny CSM dia mahafantatra anao amin'ny Scrum. Nandidy ny fananana harena izay afaka manampy anao hahita ny fivoaran'ny Scrum ny tontolon'ny asa.
Amin'io fotoana io, mandehana amin'ny tarehy iray, ny roa andro (16 ora) CSM dia omen'ny mpanofana Scrum Alliance nahazoan-dalana. Rehefa vita ny fanatontosana ny fianarana, tokony handalo ny fanadinana CSM ianao. Mba hahazoana ny mari-pana dia tokony hamaly marina ny 24 amin'ny fanontaniana 35 ianao. Hahazo fahafaham-po ho an'ny 16 Scrum Education Units tsy misy farany amin'ity andian-dahatsoratra ity ianao.
Rehefa mandalo ny fanadinana CSM ianao, dia angatahana ianao hanaiky ny fifanarahana momba ny lisansa ary hamita ny sariohatry ny fisoratana anarana Scrum Alliance.
Ny fiezahana ho marimaritra iraisana dia fialantsasatra lava maharitra. Ny fanamafisana ny fenitra sy ny fomba amam-panao ao amin'ny tontolon'ny asa dia mitaky fahamatorana, fikirizana, ary antoka ho an'ny fanovana tsy misy fiafarana. Ampitomboy ny fahaizanao sy ny fahaiza-manaonao amin'ny alàlan'ny:
Miara-mikorana amin'ny mpanjifa.
Manaparitaka ny traikefanao amin'ny vondrona Scrum Alliance amin'ny fanolorana lahatsoratra amin'ny tranokalanay.
Mandeha mankany amin'ny Fivoriana Scrum Alliance.
Miaraka amin'ny CSM LinkedIn Group.
Fampandrosoana ny fahaiza-manaonao amin'ny loha-loha-làlan-doha Scrum amin'ny alàlan'ny fandresena fahaizana fanampiny nasongadina.
Fanangonana ny traikefa sy ny fahaiza-manao hanombohana mazava ny Certified Scrum Professional (CSP).
Ampiasao amin'ny hafa ny momba ny zava-bitanao amin'ny alalan'ny CSM, logo CSM, ary ny mombamomba anao amin'ny sehatra Scrum Alliance.
Ny fidirana an-tsoratra APMG-International AgilePM® dia midika hoe mitaky ny filàn'ireo miasa ao amin'ny tontolo iainana mifototra amin'ny raharaham-barotra izay mila mailaka.
Ampitomboy ny fampandrosoana amin'ny fizotran'ny demokrasia amin'ny fandefasana enta-mavesatra.
Ny tari-dalan'i AgilePM, natsangana niaraka tamin'ny Agile Business Consortium, dia manolotra fiainana eto an-tany sy fomba fijery miverimberina izay manatanteraka fifandanjana tanteraka eo amin'ny paikady, ny fahamendrehana sy ny fahatsapana takiana amin'ny fitantanana tsara, ary ny haingana, fiovana sy fanamafisana nomen'ny hetsika .
Ny fifantohana amin'ny fitantanana ny fiaraha-miasan-tsika dia ny famolavolana fandaharan'asa hamporisihana ireo vondrona mpikatroka mba hamaly tsara ny fivoaran'ny toe-pahasalamana, raha toa ka mandray anjara amin'ny tetik'asa sy ny fanomezan-dàlana hampivelatra ny ezaka iombonana sy ny fandraharahana.
Inona ny Agile Project Management?
"Raha izany no izy, dia mitsangana isan'andro isika. Miasa mafy izahay. "
Andraso kely. Alohan'ny ahafahanao manambara ny vondrona misy anao dia maivana, it's critical of having a good understanding of ???? What is agile ????? ary ???? Inona no ampahany amin'ireo andraikitra mampihetsi-po ????? Ny fitantanana ny «Agile Venture» dia fanentanana manosika ny tetikasa izay ahafahan'ny manampahefana mpandàla handefa asa be loatra, ilaina indrindra? ary tahaka ny demigods amin'ny mpiara-miasa aminy. Tsy amin'ny fomba toy ny fitsangatsanganana, lafo sy diso ny fomba fiatrehana ny fitantanana ny firoboroboana, izay nahatonga ny vokatra mifanohitra mandritra ny fotoana maharitra.
Miova mandrakariva ny programa fanombohana. Amin'izay fotoana izay dia miankina amin'ny fametrahana ny rafitra ny mpanjifa alohan'ny ahafahan'izy ireo mitsapa-manodina ireo modely, ny tetezamita sy ny lavabe dia matetika manararaotra ny firoboroboana. Ny Fitantanana ny Tetikasa Agile Project dia momba ny fanovana ny fiovana, na dia tara loatra aza ny fanatsarana. Izany dia ny momba ny fampitaovana ireo singa manana tombony amin'ny fandraharahana tsara indrindra hanombohana, ary ny fananana angon-drakitra tsy tapaka mba hanara-maso tsara ny sarany, ny fotoana sy ny degre.
Ny Agile Project Management dia mampihena ny kalitao amin'ny ankapobeny amin'ny fanasarahana ny dingana maro ilaina amin'ny fanamboarana ny tetikasa manontolo, ny fananganana ny singa iray manontolo sy aorian'io fanandramana io mba hahitana marary maromaro. Fa kely kosa, ny ampahany azo ampiasaina amin'ny vokatra vokatra dia voatondro, noforonina sy nanandramana ara-dalàna, farafahakeliny roa na efatra herinandro.
Ny fiovàna dia manomboka rehefa mihevitra fa ny fanovana efa misy dia mety ho lasa faniriana hanatanteraka zavatra hafa ankoatra izay zavatra andrasana. Ny ankamaroan'ny fahatsiarovan-tena sy ny faniriana amin'ny planeta, na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona, dia tsy hiditra any amin'ny toerana mety tsy ahafahanao manatsara ny fahafaha-mandanjalanja. Hiantehitra amin'ny fahaiza-manao vaovao ianao ary tsy hianatra ny efa antitra mba hahay handanjalanja amin'ny fomba fanao mahazatra, anisan'izany:
Ny fahaiza-manao manokana manokana, ohatra, ny fandrobana fitsapana sy ny fampivoarana ny planina
Torolalana amin'ny antsipiriany mba hieritreritra sy hiasa amin'ny maha-vondrona azy
Toromarika hikarakarana fandaharam-potoana mandritra ny fotoana fohy
Koa satria ny fizotry ny fikikisana Scrum dia tena miavaka amin'ny fifandraisana amin'ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana, ny ankapobeny dia mila ny fiomanana amin'ny toerana fianarana na ny fianarana. Ny fisehoan-javatra mahomby indrindra ho an'ny ankamaroan'ny fikambanana dia ny fanomanana fototra, mifantoka amin'ny fahavononana hanandrana Scrum sy ny fahazoana ny fenitr'izy ireo eo afovoany.
Io fanomanana ankapobeny io dia azo avy amin'ny fampiharana, indrindra fa ny fanomanana na ny honohono, ohatra, ny fanatsarana ny fanamafisana ny fanandramana fitsapana amin'ny manodidina mba hiara-miasa amin'ny vondrona misy azy.
Mountain Goat Software dia manomana ny famolavolana sy ny toeran'ny famandrihana hanampy anao ary ny vondrona misy anao dia mampiseho marika fanatsaràna amin'ny agile sy Scrum. Mba hanamafisana orina ny fanomanana, ny fikambanana dia tokony hanome fanokafana (wikis, mahandro midina-ary-mianatra, fivarotam-pifanakalozan-tserasera) ho an'ny vondrona mba hanomezany antontan-kevitra.